Akụkọ - Oriri ike nchịkwa abụọ
Dị ka anyị niile maara na coal bụ ike dị oké mkpa maka ọkụ eletrik, ma ebe ọ bụ na ọnụ ahịa coal na-arị elu nke ukwuu, ọ na-emetụta ike ọkụ eletrik. Iji mee ka nguzozi n'etiti ikuku carbon, nchebe gburugburu ebe obibi na ikike mmepụta ihe, ikekwe ị achọpụtala na iwu gọọmentị China na-eme n'oge na-adịbeghị anya "abụọ njikwa ike ike" na-egbutu ike otu ugboro ugboro abụọ n'izu, mgbe ahụ, mmepụta na-atụgharị oge ga-agbatịkwu oge. , nke nwere mmetụta ụfọdụ na ikike mmepụta nke ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na nnyefe nke iwu na ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-egbu oge.
Na mgbakwunye, Ministry of Energy and Environment China ewepụtala akwụkwọ nke "2021-2022 Atumn Atumn and Winter Action Plan for Air Pollution Management" na Septemba. N'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi nke afọ a (site na 1St Ọktoba 2021 ruo 31st Maachị, 2022) enwere ike igbochi ikike mmepụta na ụfọdụ ụlọ ọrụ.
Iji belata mmetụta nke mmachi ndị a, anyị na-akwado ka ị tinye iwu ozugbo enwere ike. Anyị ga-ahazi mmepụta n'ihu iji hụ na a ga-enyefe iwu gị n'oge.
N'aka nke ọzọ, akụ ọ bụla sitere n'okike nwere oke, dabere na isi mmepe mmepe na-adigide, gọọmentị na-akpọku ndị ọrụ ike niile ka ha jiri nkà mmụta sayensị na ezi uche hazie ojiji ike n'oge awa kacha elu nke grid ọkụ, ghọta ojiji ike kacha elu, ma chekwaa ọkụ eletrik. Site na omume ọma ndị ahụ, anyị kwenyere na ọ bara uru na ịchekwa ọkụ eletrik yana iji ihe ndị sitere n'okike mee ihe kacha mma.
Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ya, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Oge nzipu: Sep-28-2021